PERIKOPA FJKM ALAHADY 12 OKTOBRA 2013 | FJKM Amboniloha
PERIKOPA FJKM ALAHADY 12 OKTOBRA 2013
9 Hanandratra anao ho firenena masina ho Azy Jehovah, araka izay nianianany taminao, raha mitandrina ny didin’i Jehovah Andriamanitrao ianao ka mandeha amin’ny lalany.
10 Dia ho hitan’ny firenena rehetra ambonin’ny tany fa ny anaran’i Jehovah no antsoina aminao, dia hatahotra anao izy.
11 Ary hataon’i Jehovah manana amby ampy izay hahasoa anao, dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao, any amin’ny tany izay nianianan’i Jehovah tamin’ny razanao homena anao.
12 Hovohan’i Jehovah ho anao ny lanitra, tranony fitehirizan-tsoa, handatsahany ranonorana amin’ny taninao amin’ny fotoany sy hitahiany ny asan’ny tananao rehetra. Ary hampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra.
13 Dia hataon’i Jehovah ho lohany ianao, fa tsy ho rambony; ary ho ambony tokoa ianao, fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin’i Jehovah Andriamanitrao, izay andidiako anao anio, ka mitandrina sy manaraka azy.
14 Ary aza miala amin’ny teny rehetra izay andidiako anao anio, na ho amin’ny ankavanana, na ho amin’ny ankavia, hanaraka andriamani-kafa ka hanompo azy.
20 Dia nentiny teo aminy izy; fa nony nahita an’i Jesosy izy, dia nampifanintontsintona ny tenany niaraka tamin’izay ny fanahy. Dia lavo tamin’ny tany izy sady nitsinkasinkasina sy nandoa vory.
21 Ary Jesosy nanontany an-drainy hoe: Hoatrinona izay no nahatongavan’izao taminy? Ary hoy izy: Hatry ny fony izy mbola zaza.
23 Fa hoy Jesosy taminy: Hainao hoe? Ny zavatra rehetra dia hain’ny mino.
24 Ary niaraka tamin’izay dia niantso* ny rain-drazazalahy ka nanao hoe: Mino aho; vonjeo mba ho afaka amin’ny tsi-finoako.[*Ampio hoe: sady nandrotsa-dranomaso].
25 Ary nony hitan’i Jesosy fa nihazakazaka nanatona azy ny vahoaka, dia niteny mafy ny fanahy maloto Izy ka nanao taminy hoe: Ry fanahy moana sy marenina! Izaho mandidy anao: Mivoaha aminy, ka aza miditra ao anatiny intsony.
26 Ary rehefa ninananana izy sady nampifanintontsintona mafy ilay zazalahy, dia nivoaka taminy; ary efa toy ny maty, ka dia nataon’ny maro hoe: Maty.
29 Ary hoy Izy taminy: Iny karazana iny tsy mba azo avoaka na amin’inona na amin’inona, afa-tsy amin’ny fivavahana* ihany.[*Ampio hoe: sy ny fifadian-kanina].
I Koritiana 9:7-12
7 Iza no mandeha manafika ka mivelona amin’ny haren’ny tenany? Iza no manao tanim-boaloboka ka tsy mihinana ny vokatra? Ary iza no miandry ondry aman’osy ka tsy mihinana ny rononony?
9 Fa voasoratra eo amin’ny lalàn’i Mosesy hoe: Aza manakombona ny vavan’ny omby mively vary (Deo. 25. 4). Ny omby va no ahin’Andriamanitra?
10 Sa noho izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany? Eny, fa noho izahay indrindra no nanoratana izany, satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin’ny fanantenana, ary izay mively vary dia tokony hively amin’ny fanantenana hahazo.
12 Raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo, tsy mainka va fa izahay? Kanefa tsy nanampatra izany fahefana izany izahay, fa mihafy amin’ny zavatra rehetra, fandrao hisakana ny filazantsaran’i Kristy.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 21 octobre 2013